एनआरएन अमेरिकाले नवनियुक्त राजदुत डा. कार्कीसँग भेट्घट कार्यक्रम सम्पन्न गर्‍यो। - Enepalese.com
एनआरएन अमेरिकाले नवनियुक्त राजदुत डा. कार्कीसँग भेट्घट कार्यक्रम सम्पन्न गर्‍यो।
इनेप्लिज २०७२ जेठ २ गते ३:३८ मा प्रकाशित